Wararkii Ugu Dambeeyay ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Wararkii Ugu Dambeeyay ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya
Muqdisho:-Wararkii u dambeeyay ee ka imaanaya xarunta barlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in xarunta ay ka baxeen xildhibaanadii taageersanaa mooshinka ka dhank ah Guddoomiyaha barlamaanka Mudane Jawaare.
xildhibaanada xarunta ka baxay waxaa hoggaaminaya Guddoomiye Ku-xigeenka Barlamaanka C/weli Shiikh Ibraahim , waxay ku eedeeyeen guddoomiyaha barlamaanka inuu xoog ku qabsadeen xarunta barlamaanka, islamarkaana uu keenay ciidamo uu wato.
Inkastoo ay adag tahay in xog rasmi ah oo dheeraad ah laga helo gudaha xarunta gollaha barlamaanka ee Muqdisho, ayaa hadana muuqaalo lagu soo duubay mobileka gacanta oo la soo dhigay baraha bulshada waxay muujinayaan xildhibaano tiro yar oo ku sugan xarunta iyo ciidamo boolis ah sugaya ammaanka gudaha hoolka barlamaanka.
xildhibaano tiro badan ayaa ku sugan banaanka hoolka barlamaanka, halka xildhibaanada gudaha barlamaanka ku sugan ay u badan yihiin taageerayaasha guddoomiyaha barlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari.
Labo Ajende oo kala duwan ayaa guddoomiyaha iyo Guddoomiye Ku-xigeenku waxay ku kala wargaliyeen xildhibaanada. ku-xigeenka kowaad Cabdiweli Sh.Ibraahim Muudey ayaa Xildhibaanada ku wargeliyey in la gelaayo Mooshinka ka dhanka ah Afhayeenka, halka Jawaari Xildhibaanada u ballamiyey in laga hadlaayo xaaladda derbiga Kiiniya ka dhisasyo Beled Xaawo.
Wixii soo kordha kala soco Sahanonline.com